Porto nemahombekombe ayo akanaka | Kufamba Nhau
Mahombekombe ePortugal ndeimwe yenzvimbo dzakabatikana kwazvo muEuropean chirimo. IAtlantic mhenderekedzo izere nevashanyi vanobva kunzvimbo dzinotonhora muEurope uye kupihwa kwacho kwakawanda. Vazhinji vafambi vanomira pa Porto, Portuguese nhoroondo yeguta, kuti kunyange isina mahombekombe akanakisa munyika, ichine zvishoma zvinoita kuti rwendo rwacho rukoshe.
ari Porto mahombekombe ivo vanoziva kusanganisa senge chero imwe iyo yakasarudzika runako rwePortugal mhenderekedzo nenhoroondo uye tsika yeguta rino, Porto, inova World Heritage. Sezvo kutonhora uye denda zvinotisundira kumashure kukiya, tinogona kutora nguva kuronga inotevera yezororo zhizha.
2 Porto mahombekombe
Ndiyo guta rechipiri rine vanhu vazhinji mushure meguta guru, Lisbon, uye iri pamhenderekedzo. Iine mazana emakore uye saka nzvimbo yayo yenhoroondo yakaziviswa seNyika Heritage Nzvimbo muna 1996. Mumusangano unokosha weEpiscopal Palace, chivakwa cheCity Hall, mabhiriji anoyambuka Duero, Cathedral, Clérigos Tower kana Stock Exchange Palace anoonekera.
Mamiriro ekunze ari Mediterranean uye muzhizha tembiricha inogona kukwira kusvika ku 35 ºC. Iyo Costa VerdeNzvimbo yaro inokweretesa kunakidzwa nemwaka wakanaka wezhizha, uye ndipo panowanikwa mamwe emahombekombe anozivikanwa eAtlantic. Kwete kuti akanakisa pane ese ari padyo nePorto, asi guta rinopa zvimwe zvinotsigira kushanya kweguta chaizvo.
Imwe yemahombekombe epedyo nePorto, pamuromo peRwizi Douro, ndiyo Praia do Carneiro. Iyo ine yekare breakwater uye imba yemwenje, iyo Ferlgueiras mwenje, kumucheto kwekumaodzanyemba kwemahombekombe, pamusuwo werwizi. Unogona kuona kuseri kwe Nhare yeSao Joao da Foz, chivakwa chakashongedzwa chezana ramakore rechi XNUMX.
Jecha raCarneiro rakakora uye mvura haina kujeka gungwa futi, pamwe mune aya mazwi mahombekombe ari kure kwazvo ndiwo akanakisa, asi kadhi repositi reimba yechiedza uye nhare inoita kuti ive inokwezva. Mazuva ese ane zuva uye ane dutu.
La Praia dos Ingleses Iyo yakareba jecha pamhenderekedzo ine mamwe matombo misoro. Iri mudunhu reFoz do Duero, iri pakati, ine chikafuIwo akavhurika maawa marefu. Ane chinzvimbo che Mureza webhuruuIine mukanwa merwizi padyo, chimwe chinhu kana iwe uchida kumbosviba, uye makiromita mashoma kune chinonatsiridza ... Chaizvoizvo Blue Bendera? Asi zvakadaro, igungwa rinozivikanwa, repakati, rine hupenyu hwakawanda.
La Praia do Molhe Zviri zvakare munzvimbo ino yeguta. Iwo mahombekombe pachawo musanganiswa wejecha rakakora uye matombo, nemakamuri anotaridzika kumusoro kumusoro uye nejet jetty inodzivirira vafambi vemahombekombe kubva kumafungu. Zvakare kune boardwalk nemagadheni iyo muganho weAvenida do Brasil, uye yakanaka Pergola da Foz, ine mbiru dzayo yeyero uye maitiro ayo ema30.
La Praia Castelo do Queijo, mahombekombe eiyo cheese castle, ane nhare inodzivirira iyo: iyo Fort yeSan Francisco Javier, Zvakafanana nechizi chekupedzisira? Zvichida. Iwo mahombekombe pachawo akapfupika, nejecha nematombo zvinoputira pabhodhi uye inozivikanwa kwazvo mumwedzi yezhizha. Asi pamwe inonyanya kufarirwa muvakidzani wayo Matonsinhos gungwa, iro hombe gungwa rePorto.
Matonsinhos Beach yakamisikidzwa nezvivakwa zvemafurati, mugwagwa uye maresitorendi mazhinji, saka muzhizha igungwa rine zviitiko zvakawanda. Nhasi uno mhando yemvura iri nani kupfuura makore apfuura, asi haisati yatora Blue Flag yayo. Uye zvinonzwisisika, padyo nechiteshi, hombe, uye iyo yekuchenesa, asi zvakadaro, sezvatakataura pamusoro paMatosinhos inonyanya kufarirwa.
Pano kuvhura, nekuti hakuna matombo mazhinji pakuona uye madziro echiteshi, kuchamhembe, anoripa kumhepo. Kana iwe uchida kuona kuvhura, kana kuidzidzira chero yako padanho, nakidzwa nemaonero uye iyo hove dzakanakisisa uye hove dzegungwa, nekuti Matosinhos Beach ndeyako.
Inoteverwa ne Leça da Palmeira pamhenderekedzo, kuchamhembe kwekumusoro kweguta, kuyambuka chiteshi kubva kuMatonsinhos. Iyo ine jecha jena jena, uye pier inoshamisa yematombo inodzivirira chiteshi cheLeixoes, chimwe chezviteshi zvegungwa zvakakura kwazvo munyika.
Heano akanaka Farol da Boa Nova, imba yechiedza yePorto, iine 46 metres kumusoro uye yakavakwa muna 1926. Kune zvakare maviri Marés madziva emvura, yakavakwa mumatombo chaiwo esirivha uye yakanaka kune vadiki. Iyo zvakare inoonekwa seyakanaka kumahombekombe ekufambisa
Miramar igungwa makiromita gumi kubva kuPorto, mutaundi diki remahombekombe rine mukurumbira weayo XNUMXth century chapel, iyo Chapel yeMukadzi wedu wedombo. Chingave chiri chimiro che posh Porto suburb, iine mapfumbamwe-gomba kosi yegorofu uye dzimba dzinoverengeka. Mvura kazhinji inodzikama, munguva yechando kune vanofambisa, pane maresitorendi, AerialIye ndiye anonyanya kufarirwa, uye hakuna kumbove nevashanyi vazhinji vekunze, iye ari panzvimbo yemuno.
La Praia de Fuzelhas iri kupfuura madziva emumvura eMarés. Kwakakomberedza pano kune matombo mazhinji uye jecha regoridhe uye kana mafungu achibuda kune matombo ane matombo anova nzvimbo yakanakira kuvana. Iri igungwa Mureza webhuruu uye ine akati wandei zvitoro zvekofi. Iyo Praia da Granja kumberi zvishoma, Maminitsi makumi mashanu kubva kuPorto. Jecha nematombo zvinosanganiswa zvinoenderana nemafungu ari mune inoyevedza Blue Mhenderekedzo yegungwa iyo yaikwanisa kukwezva, pane imwe nguva muzana ramakore rechiXNUMX, rakapfuma kwazvo.
Espinho, the nyanga, makiromita makumi maviri kumaodzanyemba. Mvura yakasviba, yakareba uye isina zvivakwa zvinoyevedza, mahombekombe akazara muzhizha uye akasiyiwa munguva yechando, asi nekasino, Casina Solverde. Iyo ine yakanakisa chikafu chegungwa, dziva kuchamhembe kumagumo eboardwalk, ine mvura yegungwa, uye mahotera akatenderedza. Vanoti mvura iri mudziva iri yakachena kudarika yemahombekombe.
Mamwe mahombekombe ari padyo ndiAguda Beach, aunogona kufamba uchibva kuLa Granja kana Miramar, Moreiró beach, Leçca Beach, Gondarém, Labruge beach, Al Sereias, Pedra do Corgo, Canide Sul, San Pedro da Maceda, San Jacinto, Memória beach, Ofir, Mindelo beach kana Homem ita Leme.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Cities » Porto » Porto nemahombekombe ayo akanaka
Kunyura kwezuva kwakanyanya muCaribbean